Home / प्रमुख समाचार / नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, यति धेरैकाे मृ-त्यु ! (हेर्नुहाेस् विवरण सहित)
admin February 11, 2022 प्रमुख समाचार Leaveacomment 142 Views
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११२८ जनामा को-रोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै देशभर को- रोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा ९ लाख ७२ हजार १४१ तथा एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा १ लाख ३६ हजार ९७३ जनामा पुगेको छ । संक्रमितमध्ये हालसम्म ९ लाख ३२ हजार ८२२ जना निको भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा १४ जनाले को- रोनाबाट ज्या- न गुमाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २० हजार ९८९ जनामा को- रोना परीक्षण भएको थियो । यस्तै २२१५ जना निको भएका छन् । यस्तै हालसम्म को- रोनाबाट ज्या- न गुमाउनेको संख्या ११ हजार ८७८ जना पुगेको छ ।
हाल देशभर सक्रिय संक्रमित २७ हजार ४४१ जना रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा २६५ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा २०३, ललितपुरमा ४५ र भक्तपुरमा १७ संक्रमित थपिएका छन् ।
Previous शरीरका अनावश्यक रौँ हटाउन चाहनुहुन्छ ? यी घरेलु उपायको प्रयोग गर्नुहोस्
Next मलाई बुझ्ने मान्छे पाए विवाह गर्न चाहन्छु…